Marketing secret ဘာsecretဆိုတာတှနေောကျလိုကျနသေူမြား | knowledge is power-Myanmar
Marketing secret ဘာsecretဆိုတာတှနေောကျလိုကျနသေူမြား
Marketing secret ဘာsecretဆိုတာတှနေောကျလိုကျနသေူမြား <Uni>
Marketing ဆိုတာဟာ ပညာရပျတဈခုဖွဈပါတယျ လူတျောတျောမြားမြားက သငျတနျးတှရေဲ့ ဘာsecret ညာsecretဆိုပွီးပွောရငျ ဘာတှမြေားထူးခွားတာတှရေမလဲဆိုပွီး ယုံကွပွီး အလိမျခံနကွေတာမြားပါတယျ marketing secret တှသေုံးပွီး အောငျမွငျခဲ့တဲ့ companyတှဆေိုပွီးတခါးမှလညျးမကွားဖူးသေးပါဘူး တှဖေူ့းတယျဆိုရငျ ဒီpostလေးရဲ့commentလေးမှာ ရေးပေးကွပါ၊၊
✅Secret တှကေို ကိုငျပွီး brandတှကေို ဖောကျခဲ့ဖူးတဲ့ marketerဆိုတာတှလေညျး မရှိပါဘူး နိုငျငံတဈနိုငျငံနဲ့ တဈနိုငျငံအခွအေနမေတူရငျတောငျ ပုံတူကူးပွီး marketing ကိုသုံးလိုမရပါဘူး၊၊
✅ဒီတော့ marketing ဆိုတာဘာလဲ မေးကွမယျထငျပါတယျ?
Marketing ဆိုတာ Science နဲ့ Artကိုပေါငျးစညျးထားတဲ့ ပညာရပျဖွဈပါတယျ၊၊
✅Science ဆိုတာက logical အတှအေချေါ planningတှေ, process တှေ, ဘာကွောငျ့ ဘာလုပျတယျ စတာမြိုးတှကေို logic ကကြတြှခေျေါပွီး
✅Art ဆိုတာက creative ideaတှေ , creative designတှေ နဲ့ campaignတှေ မြိုးတှဖွေဈပါတယျ၊၊
ဒီတော့ခြုံ့ကွညျ့ရငျ ကြှမျးကငျြတဲ့ marketingသမားတဈရောကျဖွဈခငျြရငျ
✅Marketing process + creative + experience ဆိုတဲ့ ၃ခုပေါငျးမှ သာဖွဈနိုငျမှာပါ မိတျဆှတေို့ ပတျဝနျကငျြမှာလညျး ရှာကွညျ့ပါ marketing secreteတှေ တကျပွီး marketing ကို ကြှမျးကငျြသှားတဲ့ marketerတှတေကယျကောရှိလို့လာဆိုတာကိုဖွဈပါတယျ၊၊
Kong Fu panda ထဲဇတျလမျးလေးထဲ သိုငျပညာရဖို့ secret စာရှကျလိုကျရှာနတော နောကျဆုံး တကယျ့secret ဆိုတာ သငျကိုယျတိုငျဖွဈနပေါတယျ
Myint Maung Maung Tun
Marketing ဆိုတာဟာ ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် လူတော်တော်များများက သင်တန်းတွေရဲ့ ဘာsecret ညာsecretဆိုပြီးပြောရင် ဘာတွေများထူးခြားတာတွေရမလဲဆိုပြီး ယုံကြပြီး အလိမ်ခံနေကြတာများပါတယ် marketing secret တွေသုံးပြီး အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ companyတွေဆိုပြီးတခါးမှလည်းမကြားဖူးသေးပါဘူး တွေ့ဖူးတယ်ဆိုရင် ဒီpostလေးရဲ့commentလေးမှာ ရေးပေးကြပါ၊၊
Secret တွေကို ကိုင်ပြီး brandတွေကို ဖောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ marketerဆိုတာတွေလည်း မရှိပါဘူး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံအခြေအနေမတူရင်တောင် ပုံတူကူးပြီး marketing ကိုသုံးလိုမရပါဘူး၊၊
ဒီတော့ marketing ဆိုတာဘာလဲ မေးကြမယ်ထင်ပါတယ်?
Marketing ဆိုတာ Science နဲ့ Artကိုပေါင်းစည်းထားတဲ့ ပညာရပ်ဖြစ်ပါတယ်၊၊
Science ဆိုတာက logical အတွေအခေါ် planningတွေ, process တွေ, ဘာကြောင့် ဘာလုပ်တယ် စတာမျိုးတွေကို logic ကျကျတွေခေါ်ပြီး
Art ဆိုတာက creative ideaတွေ , creative designတွေ နဲ့ campaignတွေ မျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်၊၊
ဒီတော့ချုံ့ကြည့်ရင် ကျွမ်းကျင်တဲ့ marketingသမားတစ်ရောက်ဖြစ်ချင်ရင်
Marketing process + creative + experience ဆိုတဲ့ ၃ခုပေါင်းမှ သာဖြစ်နိုင်မှာပါ မိတ်ဆွေတို့ ပတ်ဝန်ကျင်မှာလည်း ရှာကြည့်ပါ marketing secreteတွေ တက်ပြီး marketing ကို ကျွမ်းကျင်သွားတဲ့ marketerတွေတကယ်ကောရှိလို့လာဆိုတာကိုဖြစ်ပါတယ်၊၊
Kong Fu panda ထဲဇတ်လမ်းလေးထဲ သိုင်ပညာရဖို့ secret စာရွက်လိုက်ရှာနေတာ နောက်ဆုံး တကယ့်secret ဆိုတာ သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေပါတယ်
Categories: Branding, Digital Marketing, Marketing, Primary Activities Management, Sale and Marketing